2009-11-22 ~ ညီနေမင်း ( နည်းပညာ )
​ဒီ​မေး​ခွန်း​ကို ​မေး​တဲ့​လူ ​တော်​တော်​များ​ပါ​ပြီ . ​ကျွန်​တော်​တို့ zawgyi ​နဲ့ ​စာ​ရိုက်​လို့​ရ​တယ် ​ဆို​ပေ​မယ့် . Unicode ​ကို​လက်​ခံ​တဲ့ MS office ​အ​တွက် ​ကိ​စ္စ​မ​ရှိ​ပေ​မယ့် . Unicode ​လက်​မ​ခံ​တဲ့ pagemaker ​လို ​စာ​စီ​စာ​ရိုက် Program ​မျိုး​မှာ​ဆို​ရင်​တော့ ​ဆွေး​မယ့်​အ​ထာ​ပါ​ပဲ . ​အ​မြဲ​တမ်း​ဒီ​မေး​ခွန်း​ကို ​မေး​လို့ ​ပို့စ်​မ​တင်​ဘဲ ​ကျွန်​တော် ​စာ​ပြန်​ပြန်​ပြီး​တော့ ​ပြော​ပြ​နေ​ရ​တာ​နဲ့ ​အ​ခု​တော့ ​မ​ထူး​ဘူး​ဆို​ပြီး​တော့ ​ပို့စ်​တင်​လိုက်​တာ​ပါ . ​ကျွန်​တော်​တို့ adobe pagemaker ​ကို latest version ​အ​နေ​နဲ့ 7.0 ​ကို ​နောက်​ဆုံး ​ထုတ်​လုပ်​ခဲ့​ပါ​တယ် . adobe pagemaker ​ဟာ unicode ​ကို ​လက်​မ​ခံ​တဲ့​အ​တွက် ​ကျွန်​တော်​တို့ ​သုံး​နေ​တဲ့ zawgyi keyboard ​နဲ့ ​စာ​ကို ms office ​မှာ ​ရိုက်​သ​လို​မျိုး ​ရိုက်​လို့​မ​ရ​ပါ​ဘူး . pagemaker ​မှာ win innwa ​နဲ့ ​စာ​စီ၊ ​ဒီ​ဇိုင်း​ဆွဲ​ပြီး​တော့​မှ pdf ​ကို ​ပြောင်း​ပါ . ​ဇော်​ဂျီ​နဲ့ ​သွား​ရိုက်​ရင်​တော့ ​ပေါ်​ကို​ပေါ်​လာ​မှာ​မ​ဟုတ်​ပါ​ဘူး . ​ပင်​ပန်း​ရုံ​ပဲ​အ​ဖတ်​တင်​မယ် ​နောက်​တစ်​ခု​က ​မေး​ထား​တာ​ရှိ​ပါ​သေး​တယ် . video editing software ​တော်​တော်​များ​များ​ဟာ ​ဇော်​ဂျီ​ဖောင့်​ကို ​လက်​မ​ခံ​ပါ​ဘူး . ​ပြီး​တော့ ​ဇော်​ဂျီ​ဖောင့်​မှာ​က ​ဒီ​ဇိုင်း​က ​တစ်​မျိုး​တည်း​ရှိ​တယ် . ​ဘာ​လုပ်​ဖို့​လဲ ​တစ်​ခြား ​ဒီ​ဇိုင်း​လှ​လှေ​ဖာင့်​လေး​တွေ ​မြန်​မာ​ပြည် ​နေ​ရာ​တိုင်း​မှာ ​ရှိ​နေ​တာ​ကို ​မ​သုံး​ပဲ ​ပေ​ကပ်​ပြီး​ဘာ​လို့​များ ​ဇော်​ဂျီ​ဖောင့်​နဲ့​ပဲ video ​တည်း​ဖြတ်​ရေး ​လုပ်​ချင် ​ရ​တာ​လဲ​ဆို​တာ ​ကျွန်​တော်​တော့ ​မ​တွေး​တတ်​တော့​ဘူး . ​မြန်​မာ​စာ ​ဒီ​ဇိုင်း​ပုံ​စံ​လှ​လှေ​လး​တွေ ​လို​ချင်​တယ်​ဆို​ရင် ​ဒီ​မှာ ​ကို​ဇောင်း ​တင်​ပေး​ထား​တာ ​တွေ့​ပါ​တယ် . ​သွား​ပြီး​တော့ Download ​လုပ်​လိုက်​ပါ . ​ကျွန်​တော်​တို့ ​အ​ရင်​က adobe pagemaker 7.0 ​ကို ​ထုတ်​ပြီး​တာ​နဲ့ ​နောက်​ထပ် ​ထပ်​ထွက်​တဲ့ pagemaker update ​နာ​မည်​ကို​တော့ Adobe InDesign ​ဆို​ပြီး​ပြောင်း​လိုက်​ပါ​တယ် . Indesign CS4 ​က​တော့ ​ယ​ခု​လက်​ရှိ ​နောက်​ဆုံး​ထွက် version ​ပါ . ​အဲ့​ဒါ adobe pagemaker ​အ​တွက် latest version ​ပါ . Indesign ​မှာ​တော့ unicode ​ရ​ပါ​တယ် . ​နောက်​နေ့​မှ ​ကျွန်​တော် Indesign ​အ​တွက် program ​တင်​ပေး​ပါ့​မယ် .